विश्वभर जाँदैछ चीनको खोप, नेपालमा आउला ? - नागरिक रैबार
११ माघ, काठमाडौं । विश्वका धेरै मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) विरुद्धको खोप कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ । दर्जनौ मुलुकले खोप ल्याउने योजना बनाइरहेका छन् । यतिबेला विश्वभर नै कोरोना खोपको माग उच्च छ ।
खोप परीक्षणको स्पष्ट रुपमा नतिजा सार्वजनिक नगरेको भन्दै चिनियाँ खोपबारे विभिन्न मुलुकमा आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ । त्यसमाथि पनि चीन यसअघि नै विभिन्न खोपको मुद्दामा अल्झिएको मुलुक हो । त्यसैले पनि चिनियाँ खोपमा आशंका बढेको थियो । तर, पछिल्लो केही समयमा भने चिनियाँ खोपमा मानिसहरुको विश्वास बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ ।
ग्लोबल टाइम्सका अनुसार अहिलेसम्म विश्वका २० भन्दा धेरै मुलुकहरुले चिनियाँ कम्पनीले विकास गरेको खोप अर्डर गरिसकेका छन् । केही मुलुकहरुले अहिले चिनियाँ कम्पनीसँग खोप खरिदको विषयमा छलफल पनि गरिरहेका छन् ।
विश्वका धेरै मुलुकले चीनको कोरोना खोपमा बढाएको विश्वासलाई चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरुले पनि उत्साहप्रद भएको बताएका छन् । इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको बिडोडोले केही दिनअघि मात्र चिनियाँ खोप निकै सुरक्षित रहेको बताउँदै उक्त खोप लिएका थिए । त्यस्तै टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगानले पनि चिनियाँ खोपको प्रशंसा गर्दै आएका छन् ।
ब्राजिलका राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारोले चिनियाँ खोपको विरोध तथा आलोचना गर्दै आएका थिए । तर, ब्राजिलको स्वास्थ्य नियामकले भने मुलुकमा चिनियाँ खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ ।
चिनियाँ कम्पनीहरुले निर्माण गरेको खोप विवादरहित भने छैनन् । फरक-फरक मुलुकमा गरिएको परीक्षणमा फरक-फरक नतिजा आएको कारण पनि चिनियाँ कम्पनीको खोपबारे आशंका बढेको हो ।
सिनोभ्याकले विकास गरेको कोरोना खोपको परीक्षण ब्राजिलमा गर्दा यो खोप ५०.४ प्रतिशत प्रभावकारी पाइएको थियो । यो प्रभावकारिता अनुमति पाउन आवश्यक हुनेभन्दा केही मात्र बढी हो । यसअघि चीनले भने यो खोप ७८ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको बताएको थियो । यसअघि टर्कीले भने यो खोप आफ्नो मुलुकमा गरिएको परीक्षणमा ९१.२५ प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको बताएको थियो । इन्डोनेसियाले भने यो खोप ६६.३ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको बताएको थियो । फरक-फरक मुलुकमा देखिएको फरक-फरक प्रभावकारिताको नतिजाले सिनोभ्याकको खोपमा आशंका बढेको हो ।
अर्को चिनियाँ कम्पनी सिनोर्फमको कोरानेा खोपमा भने यूएईमा परीक्षणको क्रममा ८६ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको बताएको थियो । तर, चीनले भने यो खोप ८० प्रतिशत प्रभावकारी भएको बताएको थियो । सिनोर्फमको खोपको प्रभावकारिताबारे दिइएको जानकारी पनि एकनासको छैन ।
किन बढ्दैछ चिनियाँ खोपको माग ?
अहिले अमेरिका र बेलायती कम्पनीहरुले बनाएको कोरोना खोप सबैभन्दा धेरै प्रभावकारी पाइएको छ । तर, पनि धेरै मुलुकहरु चिनियाँ खोपमा आकषिर्त हुनुको एक कारण सहजता हो ।
चिनियाँ खोप दुईदेखि आठ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गरेर राख्न सकिने किसिमका छन् । जसका कारण यसअघि रहेकै संरचनामा धेरै मुलुकले यो खोपको प्रयोग गर्न सक्छन् । जबकी अमेरिकी कम्पनी फाइजरले बनाएको खोपलाई माइनस ७० डिग्री सेल्सियसभन्दा कम तापक्रम चाहिन्छ भने मोडर्नाको खोपलाई माइनस २० डिग्री सेल्सियस तापक्रम आवश्यक हुन्छ ।
चिनियाँ खोपको माग बढ्नुको अर्को कारण विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको महामारी पनि हो । महामारी विश्वभर फैलिएको कारण पश्चिमा मुलुकको खोपले मात्र यो महामारी नियन्त्रणमा आउन नसक्ने देखिएको छ । साथै पश्चिमा कम्पनीले बनाएको खोप यसअघि नै धेरै मुलुकले किनिसकेको र महँगो पनि भएकाले त्यसको विकल्पको खोजीमा चिनियाँ खोपमा धेरैको आकर्षण देखिएको हो ।